Ntughari orchid | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ntughari orchid
Apricot ebute ugwu
Ihe niile anyi maara bu na apricot sitere na osisi ndi na-ekpo oku na enweghi ike ibi ndu n'ime onodu uzo siri ike. Mana ekele maka mgbalị ndị ọkà mmụta sayensị na-eme, ọganihu nke Northern Triumph dị iche iche pụtara, nke nwere ọtụtụ uru. Ka anyị kwuo banyere ha. Nkọwa Ọ dị mma ịga n'ubi okpomọkụ ma laghachi n'ebe ahụ na efere nke apricots dị ọhụrụ, mfri, na apịkọtrị na-eto eto na atụmatụ ha na mgbalị ha!
Atụmatụ na-elekọta ihe nkedo na-esi na pots
Ihe ebube nke okike, nke na-adọta uche anyị na windo nke ụlọ ahịa na-ere akwụkwọ, bụ Lady's Slipper Orchid. Ọ mara mma, mara mma, ihe dịpụrụ adịpụ, nwere ọdịdị nke ifuru osisi orchid n'ụdị akpụkpọ ụkwụ nke nwanyị. Ma ịma mma ya abụghị naanị na nke a. Ụdị na-acha ọcha na ahihia ntụpọ na-enye ya ọbụna karịa osisi.
Orchid Cymbidium, iwu nlekọta na-edozi ahụ na windowsill
Cymbidium bụ ifuru nke ezinụlọ Orchid. Ihe mbu banyere ya pụtara na China karịa puku afọ abụọ gara aga. Ọbụna Confucius n'onwe ya kpọrọ ifuru a eze nke ísìsì. Cymbidium dị mfe ịnọgide na-enwe, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-ewu ewu n'etiti ndị na-elekọta ubi, karịsịa ndị na-amalite ịmalite. Nkọwa zuru ezu bụ Cymbidium a na-akpọ ọdịdị kasị mma nke orchids, nke ọ bụghị ihe ijuanya ma ọlị.
Otu esi akụ na-eto eto yabasị "Golden Semko"
Atụmatụ nke ịkụ ọka: kụrụ ma lekọta ubi
Kedu ka esi tufuo whitefly na ala na na griin ha?
Mara mma osisi ifuru - Manhattan orchid: akụkọ ihe mere eme nke ọdịdị, ịkọ na nkọwa na foto
Rebuilding garden strawberries "Garland": ihe bụ, esi akụ na-elekọta
Ụdị mgbụsị akwụkwọ dị iche iche ejiri mee ihe na odidi obodo - apụl Robin achọ
Nzuzo nke ihe ndi na-aga nke oma na akwukwo letus na dacha